Saanad Ciidan oo loo diray Shacabka Shabaab la dagaalamaya. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 6, 2018
Hornafrik-Saddex Maalin kadib dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Saanad Ciidan iyo dawooyin waxa ay u dirtay Shacab deegaano ka tirsan Gobolka Mudug kula dagaalamay Al-Shabaab.
Deegaanada Caad iyo Maamiyo ayaa dagaaladii u dambeeyey ay ka dhaceyn,waxaana la sheegay in dagaalka labada dhinac uu ku kala gaaray khasaaro aad u farabadan,isla markaana deegaanadii lagu dagaalamay badi ay la wareegeen Al-Shabaab.
Diyaarad siday hubka iyo daawooyinka ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay gaartay magalada dhuusamareeb,waxaana lagu wareejiyey Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug iyo saraakiil ka tirsan Ciidamada Maamulka Galmudug.
Kulan deg deg ah oo ay dhuusamareeb ku yeesheen Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug iyo saraakiisha Ciidamada ayaa isku raacay in si deg deg ah gurmadka loo gaarsiiyo Shacabka Shabaab kula dagaalamaya Koonfurta Gobolka Mudug.
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya Madasha Iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee Jabuuti.